Home » Aha! Jokes, Satire » မဲရုံထဲက ဟာသလေးတွေ
ရယ်ရမှာလား ငိုရမှာလား မိသိန်းကြည် တွေ ဖြစ်ကုန်ပါပကော….
မဲ ပေးနည်းတောင်….အတော် သင်ယူရအုန်းမယ့်…တိုင်းပြည်…
ယူအက်စ်က..အိုဘားမားတို့ပါတီရဲ့အကောင်က.. မြင်းဗျ..။ ကြားတော့မကြား..။
ရပ်ကွက်ထဲက အဘိုးကြီးတယောက် ၊ သူများထက် ထူးချင်လို့ နှစ်ကွက်ထုသလို ဖြစ်နေပြီ ။